Version 0.5.0 – Taagersan
March 24, 2010 by dalabyo 7 Comments
Maanta waxaan soo daayay v0.5.0 taas oo isbedel ku yara weyn oo plugin maadaama ay bixisaa laba qaababka la codsaday badan.
Qofka ugu horeeya ee waa mid noqoshada adeegga gurmad ah gudaha plugin ah. Waxaad u dhexeeya labada kursiga taageerto kor u dooran kartaa, isagoo sameeyeen gurmad aad u maalin kasta ama jidaynayey gurmad ay u dhici live. Kaabta waxaa lagu sameeyaa oo keliya turjumaadaha aadanaha, iyo in ay gurmad hab live, plugin kaliya Dira turjumaad cusub si ay adeeg gurmad ah.
Adeegga gurmad Tani waxay waddaa on top of the appengine google kaabayaasha, si ay si degdeg ah oo scalable.
Habkaani labaad waa xarun mass turjumi ah, hadda ka mid ah bogga goobaha transposh. Kaliya inaad ku dhuftay kartaa “Turjum All Hadda” button iyo bogga iyo post kasta oo lagu tarjumi doonaa idiin, Si tartiib ah laakiinse hubaal. Ogow in turjumaad la sameeyo dhinaca macmiilka u, oo aan kooxda server iyo Telcom ku filan si ma jirto wax cabsi ah ee server aflagaadeeyay adeegga turjumidda iswada.
Releases ayaa soo socda xagga 0.6.0 version ay diiradda saari doonaan dheeraad ah oo ku user ka (turjumaan) waayo-aragnimo iyo luqooyin kala duwan oo integrations wrtiting blog.
Fikrado waxaa had iyo jeer soo dhaweeyay, halkan oo keliya faallo ama tag trac.transposh.org.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: Adeegga raad raac, xarunta, sii daayo, trac, plugin wordpress
Version 0.3.9 – Dabacsanaan More
December 26, 2009 by dalabyo 5 Comments
Version cusub ee ka mid ah laba Tilmaamo waaweyn ee. Ka hore waa awoodda u xalliso luqadood ku on widget, Hada waxaad galin kartaa luqadda default aad marka hore loo guuro ama luqado hareeraha jidka kasta oo aad jeceshahay inaad. Icons ayaa u muuqday in aad u sheegtaa haddii luqadda waxaa taageera Bing iyo Google oo haddii luqadda, waa qoran tahay xaq foomka si tagay. Waxa kale oo aad bedeli kartid magaca asalka ah ee luqadda iyo magaca Ingiriisi, sidaas fahamka kaas oo luqada waa kaasoo noqda xitaa safaysay.
Waxaan sidoo kale u guuray files qaar ka mid ah agagaarka iyo awood ah file entry ajax, taasi ka dhigeysaa goobaha beddelid post siyaado ah (waxaan rajeyneynaa, noo soo sheeg haddii aad ka heli cayayaanka) iyo dhigaysa guud ahaan wax snappier. Haddii aad ayaa loo isticmaalaa si uun unzipping version cusub ee ka mid ah ku jir, hadda waa nabad ah in ay tirtirto oo dhan files in aanay ahayn in-directories sub (badbaadiyo for transposh.php) aaluq, xitaa waxaan ku talinaynaa in…
Qaar ka mid ah astaamaha more xiiso leh waxaa lagu qorsheeyey sii daayo xiga, iyo haddii aad rabto inaad socodsiino. Raac il twitter our…
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: xarunta, yaryar, sii daayo, widget, plugin wordpress
June 3, 2009 by dalabyo 7 Comments
Today’s release of transposh plugin includes a new control panel for the plugin. This new control panel offers better usability and statistics for the plugin. Also included is a feature that allows you to translate the default language as well. This is good for the case you are writing your blog in more than one language, or your readers leave comments in multiple languages. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Db0 for suggesting this new feature.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: xarunta, sii daayo, plugin wordpress